Okpomọkụ ahụ gbazee Mallorca | Netwọk Mgbasa Ozi
Okpomọkụ na-agbaze Mallorca
Bọchị ikpeazụ nke July na nke mbụ nke August na-ekpo ọkụ karịsịa na agwaetiti Mallorca. Ọnọdụ okpomọkụ nke, ọ bụ ezie na n’ehihie dị oke elu, n’abalị, nke bụ mgbe ha kwesịrị ịda, ha anaghị eme ya nke ọma.
Olee ụkpụrụ anyị na-ekwu banyere ya? N'ime ụfọdụ ndị gbazee agwaetiti ahụ ụbọchị ole na ole: ogo 36, 39 ... Ha eruola 41ºC. Mana nke kachasị njọ abụghị na: iru mmiri na-adị elu nke ukwuu, ihe dịka 70%, nke na-eme ka mmetụta ọkụ dị ọtụtụ ogo dị elu.
Anyị zuru oke oge canicular a na-ahụkwa nke a n'ọtụtụ akụkụ nke Spain, ọkachasị na ndịda ọkara nke Iberian Peninsula na Balearic archipelago. Anyị na-achọ iru n'etiti oge ọkọchị ma anyị agafeworị abụọ ebili mmiri, na site na ihe omume nke ikpo ọkụ nke na-egosi obi ebere na Mallorca.
Statelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe nke State na-ekwusi ike oroma maka ihe egwu nke okpomọkụ ruo 39ºC maka ime na northwest nke agwaetiti ahụ, yana mkpuchi odo maka ihe egwu nke okpomọkụ ruo 37ºC na ndị ọzọ. Ọnọdụ nwere ike ịdịgide ruo Sọnde, ụbọchị a na-atụ anya na ndị kachasị ga-ada ma ọ dịkarịa ala ogo 4 ma e jiri ya tụnyere ndị a na-edekọ ugbu a.
Ruo ugbu a, ọnọdụ kachasị elu na ndekọ bụ:
Palma, Mahadum: 40,3ºC
Ndị pere mpe enweela oke: dịka ọmụmaatụ, na Mahadum Palma, ha edeghị aha ma ọ bụ ihe na-erughị 24ºC, na Sierra de Alfabia (Bunyola), ha nwere 23ºC. Nke ahụ bụ enwere abalị ebe okpomọkụ, ebe ọ bụ na Mercury arị elu karịa 20ºC. Mana ihe kacha ju anyi anya bu na abali abali nke onwa asato na ebe ufodu ya di oku karia ubochi nile gara aga: n'elu 1ºC, dika ndi AEMET de Baleares biputara Twitter.
Foto - Diariodemallorca.es
Ọ dabara nke ọma, ọnọdụ ga-aka mma a na-abịa ụbọchị. Mana ọ bụrụ n ’ị nọ n’agwaetiti a, kpachara anya ma ghara itinye onwe gị n’anyanwụ n’etiti oge elekere nke ehihie na obere enweghị nchedo 😉.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Okpomọkụ na-agbaze Mallorca
Spain n'ihe ize ndụ nke ịghọ ọzara site na njedebe nke narị afọ
A malitere atụmatụ imeghari maka mgbanwe ihu igwe na Spain